​मन्त्रीलाई रोकेर पारिबाट मोबाइलमा…. « Jana Aastha News Online
प्रकाशित मिति : १४ माघ २०७४, आईतवार १३:१०
सरकार बन्नासाथ भारत, चीन, अमेरिकाजस्ता देशले बधाई दियो–दिएन वा कसले पहिला दियो भन्ने कुराले नेपाली राजनीतिमा अर्थ राख्दै आएको छ । तर, सरकार बन्ने मितिको अझै टुंगो छैन, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले निम्तोका लागि फोन गर्न भने दोस्रोचोटी भ्याइसके ।
बालकोटलाई लैनचौरस्थित दूतावासले सोमबार नेपाली समयअनुसार ४ः३० बजे ‘अलर्ट’ रहन सूचना पठायो । हिजो–आजको बालकोट न प¥यो, बैठक र छलफल, नभए पनि बधाइ दिनेको ताँती चल्ने ठाउँ ! एमाले अध्यक्ष केपी ओली यस्तो सूचना आउँदा बैठक कक्षमै थिए ।
स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई दूतावासले त्यो समय भारतीय प्रधानमन्त्रीको फोन आउने सूचनामात्र दिएन, निर्धारित समय बाँकी हुन लाग्दा अब यति मीनेट बाँकी छ भनेर काउन्ट–डाउन नै गर्न थाल्यो । ‘अब दुई मीनेट बाँकी छ’ भन्दै फोन आयो । राजेशले बैठक कक्षभित्रै छिरेर त्यो फोनमा जोडे । फोन लिनासाथ ओलीचाहिँ छेउको कोठामा छिरे । फर्किएपछि सहभागीलाई सुनाए, ‘कल कड्सी रहेछ !’ ओलीले मोदीलाई उद्धृत गर्दै भने, ‘मैले विदेशमन्त्री सुष्मा स्वराजलाई पठाउन लागेको थिएँ । त्यसबीचमा तपाईं पनि बिरामी भएर बैंकक जाने कुरा आयो । त्यसपछि पठाइनँ । सरकार बन्नेबित्तिकै तपाईंलाई दिल्लीमा स्वागत छ ।’ यसो भन्दै केपीले आफूले भनेको कुरा बताए, ‘होइन–होइन, यसपालि तपाईं पहिला काठमाडौं आउनुस् !’ केपीसँगको यो संवादले भन्छ, पछिल्लो समय नेपालसँग हरेक मामिलामा चीनको बढ्दो सघनताप्रति बढी चिन्ता र नेपालमा नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएलगत्तै आफ्नो देशमा आउने कुरासँग गहिरो चासो छ ।